Iprojekthi yeMicrosoft ka-2010 yeeDummies Cheat Sheet
Iprojekthi ye-2010, eyona nto yamva nje isoftware kaMicrosoft yolawulo lweprojekthi, inika ubutyebi obuninzi bokusebenza. Iprojekthi yeMicrosoft ka-2010, nangona kunjalo, ayifani nenye isoftware owakhe wayisebenzisa, ke ukuyazi kakuhle kungabonakala kuyinkqubo eyoyikisayo. Eli phepha lokuKopela likunika iingcebiso kunye namacebo okwenza into oyenzayo yonke imihla njengomphathi weprojekthi.
Uyisebenzisa kanjani iMicrosoft Project 2010 ukusombulula iingxaki zeMithombo
Xa izibonelelo zabelwe indawo engaphezulu, sebenzisa iMicrosoft Project 2010 ukuqinisekisa ukuba iprojekthi yakho ihlala ilungile. Ngeprojekthi kaMicrosoft ka-2010, ungasombulula ukungaboni ngasonye ngokutshintsha ii-asayinimenti, ukutshintsha ucwangciso, nokunye okuninzi. Qwalasela la maqhinga alandelayo ukusombulula ukungavisisani kwezixhobo:
Hlaziya ubukho bezixhobo kwiprojekthi. Umzekelo, tshintsha ukubakho komntu ukusuka kwiipesenti ezingama-50 ziye kwiipesenti ezili-100.
Guqula ii-asayinimenti ukuthatha ubutyebi kwezinye izinto ngexesha lokungqubana. Umbono omtsha weSicwangciso seQela ulungele le njongo.
Hambisa umsebenzi apho ubutyebi bunikezelwe khona kamva xa usebenzisa isixhobo soMsebenzi wokuHambisa okanye uguqule ubudlelwane bokuxhomekeka emsebenzini.
Yongeza isibonelelo sesibini kumsebenzi apho uxanduva olwabiweyo luxakeke khona. Guqula umsebenzi ucwangcise ngokuzenzekelayo kunye nokuqhutywa ngumzamo, ukuba kukho imfuneko, ukuvumela umsebenzi ukuba ugqitywe kwakamsinya kwaye ukhulule isibonelelo kwangoko.
Elonaqondo liphezulu lekhonsathi
Guqula oovimba kunye neminye imisebenzi. Zama iWizard yokuThabatha iZibonelelo ngoncedo kule ukuba usebenzisa iProjekthi yeServer.
Khetha umsebenzi kwaye ucofe i Hlola iqhosha kwiqela leMisebenzi yeTebhu yomSebenzi. Izinto eziqhuba ixesha lomsebenzi okhethiweyo zinikiwe ukuze ukwazi ukuthatha nawaphi na amanyathelo afunekayo ukujongana nawo: umzekelo ukuba ukuxhomekeka komsebenzi kukuqhuba ixesha kwaye ungakutshintsha oko kuxhomekeka, kunokusombulula ingxaki yakho.
Yenza utshintsho kwikhalenda yesiseko sobutyebi ukuvumela isibonelelo ukuba sisebenze ixesha elingaphezulu evekini.
Yenza iShedyuli yeProjekthi ngeProjekthi kaMicrosoft ka-2010
Ukudala ishedyuli yeprojekthi kulula ngeProjekthi kaMicrosoft ka-2010. Oku kulandelayo ngamanyathelo aluncedo anokukunceda wakhe ishedyuli yeProjekthi yeMicrosoft. Emva kokuba ugqibile uluhlu, ukulungele ukuqala iprojekthi kwaye ulandele nayiphi na inkqubela kuyo. Ungaxela inkqubela phambili kubaphathi ngokusebenzisa ingxelo zeProjekthi yeMicrosoft, ngokuprinta nje ishedyuli yakho, okanye ngokwabelana ngayo kwiWebhu.
Ngenisa ulwazi lweprojekthi (njengomhla wokuqala).
Misela ikhalenda yakho yomsebenzi.
Yenza imisebenzi, ukhethe indlela yokuhlela kunye nohlobo lomsebenzi kunye nokufaka ulwazi malunga nexesha.
Yenza i-milestones (imisebenzi enobude be-zero) kwiprojekthi yakho.
Hlela imisebenzi yakho ngezigaba, usebenzisa ulwakhiwo lweProjekthi.
Ukuseka ukuxhomekeka phakathi kwemisebenzi, ukongeza iingxaki ukuba kufanelekile.
Yenza izixhobo, unike iindleko / ireyithi kunye nolwazi lwekhalenda yezixhobo.
Nika izixhobo kwimisebenzi.
Sombulula ukungavisisani kwezixhobo.
Phonononga ixesha elipheleleyo kunye neendleko zeprojekthi, wenze uhlengahlengiso xa kukho imfuneko.
IiSayithi zeWebhusayithi eziluncedo ekuCebiseni uLawulo lweProjekthi
Nokuba ujonga ulawulo lweprojekthi njengobugcisa okanye ubuchule, iprojekthi yeMicrosoft ka-2010 ikunceda ukuba ukwenze ngcono. Yandisa ubuchwephesha beProjekthi yeMicrosoft ngokundwendwela iiWebhusayithi ezinikezela ngeetemplate kunye nokongeza umntu wesithathu kwiProjekthi yeMicrosoft kunye nolunye ulwazi lolawulo lweprojekthi:
IMicrosoft Template Gallery
Isishwankathelo soLawulo lweProjekthi yeMicrosoft Enterprise
IZiko loLawulo lweProjekthi
Umbutho waseMelika woPhuculo loLawulo lweProjekthi
i-allPM, iZiko laMazwe ngaMazwe lokuFunda, iphepha lasekhaya loMphathi weProjekthi
Umbutho woLawulo lweProjekthi weHlabathi
Iprojekthi yeMicrosoft ka-2010 yamaqhosha amfutshane
Iprojekthi yeMicrosoft ka-2010 yandisa ukusebenza ngokukuko njengoko ulawula iiprojekthi- kodwa iindlela ezimfutshane zeProjekti 2010 zikongela ixesha kwikhibhodi: Nazi ezinye iindlela ezinqumlayo oza kuzisebenzisa ngalo lonke ixesha usakha kwaye usebenza nesicwangciso seProjekthi.
Faka Ukufaka umsebenzi omtsha
Ctrl + K Ifaka ikhonkco
F7 Iqala ukujonga ukupela
I-Alt + F10 Yabela izixhobo
Shift + F2 Ivula ibhokisi yencoko yababini yoLwazi loMsebenzi
F1 Ivula Uncedo lweProjekthi yeMicrosoft
Ctrl + F Ibonisa ibhokisi yencoko yababini yokuFumana
Ctrl + F2 Qhagamshela imisebenzi ekhethiweyo
Ctrl + G Ibonisa ibhokisi yokuya kwibhokisi yencoko
Ctrl + H Ibonisa Faka ibhokisi yencoko yababini
Ctrl + Z Uhlehlisa isenzo sangaphambili
Ctrl + Y Iphinda yenze isenzo esingenziwanga
Ctrl + P Ibonisa imbonakalo yokuPrinta kwiBackstage
Ctrl + N Ivula iProjekthi entsha engenanto
Ctrl + O Ivula ibhokisi yencoko yababini evulekileyo
Ctrl + S Igcina ifayile
Ulawulo lweProjekthi Iindlela zokuGcina ixesha
Ulawulo lweProjekthi lumalunga nokonga ixesha. Kodwa kwanezixhobo zolawulo ezinjengeMicrosoft Project 2010, iprojekthi yakho inokusebenza ixesha elide kunokuba ubulindele. Kwimeko apho, zama ezi ndlela zilandelayo ukuqinisa ixesha:
Yandisa inani lemisebenzi ecwangciswe ngokuzenzekelayo kwisicwangciso sakho seprojekthi ukuze iProjekthi ibenako ukuzicwangcisa ngokuzenzekelayo.
Guqula ukuxhomekeka ukuze imisebenzi iqale ngokukhawuleza, ukuba kunokwenzeka.
Yenza ukuxhomekeka kokugqagqana xa kufanelekile.
Nciphisa inani lokuyekelela (kodwa ungaze ulahle yonke into!) Kwimisebenzi nganye.
Yongeza izixhobo kwimisebenzi eqhutywa ngumzamo eqhutywa ngokuzimeleyo ukuze bayigqibe kwangoko.
Cinga ukuba ngaba iprojekthi yakho inokuyenza ngaphandle kwemisebenzi ethile (umzekelo, inqanaba lesibini lovavanyo lwe-QA okanye uphononongo lolawulo loyilo lwephakheji).
Outsource isigaba seprojekthi yakho xa abantu abangaphakathi endlwini bengakwazi ukuyigqiba kuba baxakekile neminye imisebenzi.
Ungasonga njani isipho
idosi ekhuselekileyo ye-ibuprofen
glucosamine chondroitin msm izibonelelo
yintoni igazi legongqongqo